Malaysian Virgin ntutu Malaysian Virgin ntutu Ruo Mgbe Ebighị Ebi na Nwunye ntutu
Malaysian Virgin ntutu - Mgbatị Ọsọ Na-amaghị Ama
N'ịbụ onye mara maka mma, sheen eke, na ịdị mma dị elu (10-A), mgbakwunye ntutu ntutu anyị nke ụmụ nwanyị Malaysian ga-agbakwunye ọhụụ zuru oke na ndị niile na-eyi ha. N'ihi na ọ bụ ntutu na-amaghị nwoke, mgbakwunye ndị a na-ejide agba na-acha odo odo nke ọma. Ngwakọta ntutu isi nke ọ bụla bụ ntutu isi mmadụ 100% ga-ejikwa afọ nlekọta kwesịrị ekwesị na hydration. Ejiri ntutu isi anyị dị okpukpu abụọ iji gbochie ịkwafu na nke ọma na-emetụta ndị ahịa ọ bụla. Igodo-N’ogho ntutu di kwa.
Iyo Iyo Ezigbo Wave mechie ntutu ntutu ntutu isi